1. FDA Yakagamuchirwa mutoro kurasikirwa nemishonga: Lorcaserin HCL
2. Kurumidza Kuongorora Lorcaserin (846589-98-8)
4. Nzira Yokutora Lorcaserin
5. Missing Dose
7. Kuwedzera Tip-Offs Kana pa Lorcaserin
8. Migumisiro Yakashata yeLorcaserin
9. Kuchengetedza Lorcaserin
10. Kurasikirwa Zvakanaka kwaLorcaserin
11. Lorcaserin Ongororo Kubva Kudhakwa
FDA Yakagamuchirwa mutoro kurasikirwa nemishonga: Lorcaserin HCL
Uri kutsvaga nzira yakachengeteka yokurasikirwa neroyo yega pasina kukanganisa kukakavara pamusoro pekuedza uye kusabereka kushanda? Edza kuora muviri kurasikirwa lorcaserin. Tsvaga kuti zvinobudirira sei kuwedzera, lorcaserin nzira yekuita, uye nei yakakunda kugamuchirwa kweDFA.
Sezvazvino, nezve31% yehuwandu hweU.S. huwandu hwehuwandu kana huwandu. Mamwe mapeji anosimbisa kuti 69% yevanhu vakuru avo vanopfuura makore e20 vanorema kana kuwandisa. Izvozvi, izvi zvinoreva kuti mumarudzi ose evanhu vane 10 mukati mezera rino, iwe unogona kuenzanisa kusvika kune 6 avo vanenge varipo. Panenge ne30% yevadzidzi vekusekondari vangave vakawandisa kana kuwandisa.
Imwe nzira yakarurama yekugadzirisa kuneta ndeyokushandisa nguva dzose, chirongwa chekudya, gastric band opera, kana kushandiswa kwekurema-kurasikirwa nemishonga. Kunyange zvazvo kuderedza mapiritsi kunoshanda chaizvo mukuderedza mapaundi mashoma emumuviri, ivo vakave vachibatanidzwa nehutachiona hwemwoyo. Kunze kwekudaro, pane zvave zvichinetsa pamusoro pemikana yehutano hwepfungwa.
Kusvikira 2012, lorcaserin supplement, inozivikanwawo seBelviq, yakanga isati yamboita kuora-kurasikirwa kwepiritsi yemapiritsi nekuda kwezvikonzero zvisingaverengeki zvehutano. Asi zvino, tsvakurudzo yeUnited States yakagadzirwa pavanhu vanoverengeka yakaratidza kuti piritsi iyi yakachengeteka uye inobudirira isina hutano hwakakomba huri pamwoyo wemunhu. Vaya vanoishandisa vanogona kurasikirwa nehuwandu hwe5 -10% yemutumbi wavo, zvichienderana nekuti vanoita mabasa epanyama uye kudya kwema-calorie.
Kuwanda kwehupano nekureruka
Saka, musiyano wei pakati pekuneta nekuwedzerwa kudarika? Kana muviri wako mashoma index (BMI) iri kupfuura 30kg / m2, saka iwe uzere. Kana kukosha kwetikiti pakati pe25 uye 29.9kg / m2, iri kuwedzera-kurema. Synephrine HCL Inoshanda Sei Muviri Wako?
Chikonzero chinokonzera kuderera hachisi pachena zvakajeka asi zvikonzero zvinotenderera zvakapoteredza zvizvarwa zvemashoko, zvemagetsi, zvepanyama, uye maitiro. Kuoma kwechiitiko ichi kunokonzera chirwere cheshuga, chirwere chemwoyo, hyperlipidemia, apnea, mafuta echiropa chirwere, hypertension, uye mamwe makondombera.
US Kudzidza Kunobudisa Mwoyo Mumuviri weLorcaserin
FDA haina kungobvumira kushandiswa kweLorcaserin supplement nekuda kwekuda kwevanhu kana kubudirira kwayo mukudzivisa kuneta. Chinhu chikuru chakakonzera kubvumirana kwayo ndicho chikuru chekuAmerica chakaitwa mumakore e3.3.
Mukutaura kune chidzidzo chakatumirwa pamusoro The New England Journal of Medicine, lorcaserin inoratidza kuti ine mishonga inokwegirwa yekugadzirisa uremu kune vose vanorema uye vanodarika kuwandisa.
Vatsvakurudzi vaisarudza varwere veC12000 vakanga vasina kungova nehuwandu hwehuwandu hwemapfupa asiwo vanotambura nemamiriro ezvinhu akasiyana-siyana emwoyo. Kubva muboka iri, vamwe vevanhu vakagoverwa kugamuchira zuva rega rega lorcaserin dosage asi vamwe vose vakatora placebo.
Mushure megore, 39% yevarwere vakapa lorcaserin uye 17% yevaya vari muboka re placebo rakanyorwa zvishoma ne5% yekurema kwekurehwa. Sezvo zvisingaiti zvakakwana, boka reLorcaserin rakanga riri pangozi yakaderera yekukura nechirwere cheshuga kunyange mamwe maitiro epamutemo angaguma ne hypoglycemia yakakomba.
Apo kuenzanisa kwakaitwa pakati pevatori vechiuto vachitora lorcaserin nevaya vari pa placebo, kwakanga kusina zvinyorwa zvekuwedzera kwehutano hwemwoyo kune rimwe boka. Chero iyo lorcaserin inowedzera kukanganisa kushaya kuenzaniswa nemamwe nzira.
Lorcaserin uye Mwoyo Mushonga Wemagetsi
Saka, sei vanhu vakatenga pfungwa yokuti lorcaserin yakasungirirwa nehutachiona hwemwoyo? Rega nditsanangurire ...
Kune 14 mhando dzakasiyana dze-5-HT receptors muhutano hwevanhu. Kuva serotonin 2C agonist, lorcaserin inofungidzira 5-HT2C receptors of central central nerve system. Asi zvakadaro, ichi chinogamuchirwa chakabatana ne 5-HT2B uye 5-HT2A receptors.
Izvi zvinoreva kuti, kana 5-HT2C inokurudzirwa, imwe mvumo ine mukana wakaenzana wekugadziriswa. Izvi zvakajairika mu serotonin kuora-kurasikirwa mishonga, saka, kupararira kwematambudziko emagetsi emwoyo uye kupemha kwemapurisa mukati mevashandisi.
Muchiitiko ichi, hukama hwe lorcaserin pa 5-HT2C iri 100x mukuru kudarika 5-HT2B receptors. Nhamba yezuva nezuva inobata zvigadziro zvekusunga. Kana ukanyanyisa kudarika, iwe uchapfuura muganhu uye chikamu chinowedzera chichafanira kusungira kune mamwe mapepa. Apo kushandiswa kwe5-HT2B inokonzera chirwere chemoyo valvular, kukurudzira kwe5-HT2A kunotungamirira kumanzwiro anochinja, kunzwa 'kukwirira', euphoria, uye kukanganisa.
pari kuora muviri kurasikirwa lorcaserin ndiyo chete inorapwa inokurudzira 5-HT2B pasina kuisa mishonga yemwoyo kana kukuvadzwa kwepermetheni.
Zvokudya neDrug Administration (FDA) zvakatanga kugamuchira mishonga yaBelviq kuVIV varwere vakuru mu2012. Iyi mvumo yakaitika makore matatu shure kweArena Pharmaceuticals naEisai Inc. yakaisa NDA (New Drug Application) Lorcaserin. Zvakatora FDA makore maviri kuti vet data idzi, kusanganisira zvipatara zvidzidzo zvinokonzerwa ne lorcaserin, vasati vapa mutongo wokupedzisira.
Kwemaminitsi anenge makumi maviri ikozvino, Belviq inomirira kuva yekutanga mapirisa kuti atore kugamuchirwa kwaDhava. Kunyange zvazvo iri mvumo yemishonga yemishonga muUnited States, haina kumbobvumirwa muEurope.
Kurumidza Kuongorora Lorcaserin (846589-98-8)
Lorcaserin hydrochloride chinhu chakasvibirira chekirasi yeva serotonin receptor agonists. Iyo ikemikari inowanikwa neCAS 846589-98-8
Ngatitangei mune tsanangudzo yakajeka yekemikemikari ...
Kemikari zita (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
Nhamba yakanyunguduka (° C) 193 - 200
Solubility (25 ° C) · Mvura
Storage tembiricha -20 (° C)
Usage Kutakura kuyerwa kwevanhu vakuru
Cherechedza kuti lorcaserin hydrochloride iine pharma-grade compound. Kunyange zvazvo zvinowanikwa nyore nyore mune mamwe makemikari ezere, inofanira kushandiswa zvakanyatsoshandiswa pakutsvakurudza kwe laboratory, kubudirira, uye zvinowanikwa zvinodhaka. Haisi yekushandisa kwevanhu, uye naizvozvo, haigoni kutengesa kune varwere.
Maererano neGHS system of classification, lorcaserin hydrochloride inhengo yechina inogumbura. Iyo inobata zvinyorwa; H302, P264, P301, P312, uye P330. Inogona kuva inotyisa kuburikidza nekumedza, kuputika, kuisa, kana pakusangana zvakananga neganda.
Kutanga Kubatsira Maitiro
Mukana we lorcaserin inopisa, shambidza muromo weakakanganiswa nemvura yakawanda yakachena. Ramba nekuchenesa kwemaminitsi anotevera e15, pamamiriro ezvinhu kuti munhu anoziva. Usaedza kupa chero muromo wekutonga kana mumwe munhu asingazivi.
Kana iyo inowira paganda, ichinge ine mvura yakawanda yemvura yakachena uye sophorera. Kana iri paziso, shandisa mvura inomhanya kuti uvasuke kwemaminitsi e15. Mapoka akawanda equipatories akashongedzerwa akaisa kuchengetedzwa kwemvura uye kuvhara maziso kuti zvive nyore kana uchiita mhinduro dzekukurumidza.
Kana munhu akabatwa akakurudzira lorcaserin HCL, uende navo mumba mune mweya mutsva. Kana kufema kunenge kwakaoma, shandisa kupemha kwemajoka uye utsvake rubatsiro rwechiremba.
Kupfeka mazai ebasa, magirazi ekuchengeteka, uye magirasi asingagadziki. Uyewo, shandisa mhepo yokufema, iyo yakagadziridzwa neNIOSH.
Kutarisira uye kuchengetedza
Usapinda mumoto, mhepo, guruva, spray, kana zvimwe zvinhu zvine mhepo mu laboratori. Deredza nguva yekutsvaga zvakanyanya. Panguva yekuchengetedza, chengetedza kuchengeta lorcaserin muvhara rakavharidzirwa uye urivhare zvakachengeteka kubva kune vamwe vashandisi vesarotori.
Lorcaserin yakagadzikana pasi pemitemo yakatarwa uye inodzorwa. Zvisinei, iwe unofanirwa kuichengetedza kubva kune zvakasvibiswa zvakasimba sezvo zvinogona kukonzera kukanganisa kwemiti. Izvo zvakagadziriswa ndeye oxyid ye nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, uye hydrogen chloride.
Lorcaserin is serotonin 2C receptor agonist. Iyo mishonga inobatana zvikuru yevanhu 5-HT2C. Inotarisa mamwe makemikari mu hypothalamus, izvo zvinokonzera kudya.
Ndibvumirire kuti ndiitsanangure zvesayenzi ... Belviq anopindirana neCentral Nervous System (CNS), kunyanya mu hypothalamus. Chirwere ichi chinokonzera 5-HT2C receptors, iyo inowanika pane pro-opiomelanocortin neurons mukati memusana we arcuate. Izvi zvinokurudzira kusunungurwa kweAl-MSH, iyo inonzi hormone inoshanda pa melanocortin-4-receptors kudzivisa kudya kwevanhu. Iyi chikamu cheropi chinotungamirira nzara yakadaro apo kana ichigadziriswa, icharatidza kuti muviri wako wakakwana nguva yakawanda.
Kana inotorwa, chirwere ichi chinoderedza kushandiswa kwezvokudya uye chinounza manzwiro ekuti satiation. Kunyangwe iwe uchiri kudya zvekudya zvakaderera-calori, Belviq achadzivirira zvaunoda. Iwe uchatotanga kuva wakakwana pakudya zvishoma. Mutungamiri paIpamorelin Mitsva uye Ipamorelin Use
Kuva nechido-kudzvinyirira, kurapwa kunoita kuti ure kurasikirwa muhuwandu uye kuwandisa kwevarwere. Kunze kwekuti, inobatsira kutarisa humwe hukama hwehutano hwakadai sehuwandu hwehutachiona hwehutano, chirwere chemwoyo, uye chirwere cheshuga chechipiri.
Nokuda kwechirwere ichi kuti chibudirire, mumwe anofanirwa kuisa mabasa emumuviri uye chirongwa chekudya zvine utano mukugara kwavo. Hapana chikafu chakakosha chokutevera asi kunamatira kune pasi-makoriyori kunogona kubatsira. Kana iwe uchiramba uchitonga lorcaserin mugore rose, iwe ucharasikirwa nechiyero che3.5% chekutanga kwehutano hwemuviri wako.
Zvisinei, pane dzimwe nguva dzisina kuitika apo mushonga wacho hauna zvishoma zvinogadzirisa. Tora, somuenzaniso, iwe usingashandisi kushandisa chiremba kwemwedzi inenge mitatu, asi hapana kuonekwa kunoonekwa mumuviri wako. Zvakanaka, ichi ndicho chikonzero apo iwe unofanirwa kurega kurapwa uye uzvidzivirire kubva pakuwedzerwa kunetseka. Kana iwe usingakwanisi kurasikirwa nemapirundi anonzwisisika nevhiki yechigumi nembiri, hapana tariro yekubatsirwa nemishonga zvakare.
Nzira Yokutora Lorcaserin
Sezvinotungamirirwa nemitemo yeDDA, lorcaserin inofanira kungotorwa chete nevarume vakuru vane muviri mashizha index (BMI) ye30kg / m2 uye pamusoro. Kana iwe uchitambura nehutano hwehutano hwechirwere cheshuga, huwandu hwehutano hweropa, kana chirwere chemwoyo, iwe uchiri kukodzera kushandisa mushonga wacho apo mamiriro ako BMI anopfuura 27kg / m2.
Murwere anofanirwa kutora muromo rimwe 10mg tablet kaviri pazuva sezvinoenderana nemirayiridzo yechiremba. Zvakanaka, iwe unofanirwa kunge uri kutungamirira mishonga panguva yakanyatsotsanangurwa nguva. Shingai tablet iyo yose isina cheku kana kuipwanya. Iwe unogona kutora chirwere chinonzi lorcaserin kana kuti usina kudya kudya zvichienderana nekuda kwako kana kukurudzira kwachiremba.
Kana iwe usina kugamuchira mirayiridzo yakakwana kubva kuchiremba wako, unogona kugara uchitsimbisa neraira yepajeri. Usambofa uchitora kudhakwa kana chimwe chinhu chiduku pane zvawakanga watemerwa sezvo iwe ungapindira nemigumisiro.
Zvinokurudzirwa kutora Belviq muhupenyu hwese hwehupenyu kuitira kuti varwise zvimwe zvezvirwere zvinorema. Kunze kwokunge wakurudzirwa nachiremba wako, haufaniri kumbomira lorcaserin muyero.
Wakambosara here? Ingozvitora nguva pfupi mushure mekunge pfungwa iyi ichikurova. Zvisinei, kana yava nguva yekuita dhigirii inotevera, ramba uine purogiramu yako yenguva dzose uye ukanganwe nezvemaitiro asina kurasikirwa.
Kana iwe ukazvifukidza iwe nepamusoro pehwendefa reBelviq, unogona kunge uine zviratidzo zvakakomba uye migumisiro inotevera. Kana zvikaitika kudarika, donsa mutsara kune chepfu yekudzivirira nzvimbo pakarepo mushure mokunge mishonga inotanga kutora migumisiro yako pauri. Nhamba yekubatsira iri 1-800-222-1222.
Zvimwe zvezviratidzo zvinogona kusanganisira mafungiro ehupenyu, kuora mwoyo, kunetseka, kunzwa kurwadza, kurwadziwa kwepamuviri, kurwadziwa kwepfungwa, kana kukanganiswa. Mune zviitiko zvakanyanya zvakadai sekugumburwa, kufema kunetseka kana kukoromoka, rinyorera 911 kune zvinoitwa nokukurumidza. Sei Sibutramine yakakurumbira mukurasikirwa kwekurema?
Kune maitiro mashoma apo lorcaserin inogona kushandiswa zvisina kunaka. Maitiro akakwirira anogona kukonzera musikana kunzwa "akakwirira" uye anotora maitiro. Ihwo hunoita-tsika uye saka hunogona kukonzera kuderedzwa kwezvinodhaka. Pamusana peizvi, Drug Enforcement Administration yakarondedzera iyo seChirongwa IV.
Kunyanya Kuchengetedza Kana pa Lorcaserin Kure-kurasikirwa nemishonga
Asati Atora Lorcaserin (Belviq)
Ratidza chiremba wako kana uri weergoric kune chero mishonga. Nekubatsirwa nemumwe wemishonga, simbisa kubva mubhuku rekurayiridzi kana zvipembenene mu lorcaserin zvingaita kuti zvirwere zvirege kuitwa.
Kana iwe uri mune imwe kurapwa kusanganisira, mishonga, kusagadziriswa, kana mishonga yemishonga, iva nechokwadi chekuzivisa mutori wemapurisa. Izvi zvinokosha sezvo zvichibatsira kusimbisa mikana yekubatana kwezvinodhaka-zvinodhaka uye kuti inobata sei pharmacodynamics ye lorcaserin mumuviri. Somugumisiro, chiremba angave akamanikidzwa kugadzirisa chirwere chako chinorwarisa chirwere cheshuga uye uchengetedze zvakanyanya pamigumisiro.
Pharmacologically, kuwirirana kwemishonga pakati peBelviq nemimwe mishonga inogona kutyisa upenyu. Mienzaniso yakajairika imishonga inorayirwa kune migraines, kuora mwoyo, kupisa, kana zvirwere zvepfungwa. Heino zororo rakazara remishonga nemishonga yezvinodhaka kuisa mumufananidzo;
Tricyclic vanodzvinyirira (TCAs) se nortriptyline, trimipramine, protriptyline, amitriptyline, doxepin, clomipramine, amoxapine, kana imipramine
Kusarura serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) sakaita fluoxetine (Sarafem), sertraline, paroxetine (Paxil), escitalopram, citalopram, uye fluvoxamine
Dextromethorphan (inowanikwa mumishonga inotonhora)
Selective norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) kusanganisira venlafaxine (Effexor) uye duloxetine
Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) yakadai se linezolid, tranylcypromine, methylene bluu, isocarboxazid, selegiline, uye phenelzine
Kurema-kurasikirwa nemishonga yakadai saSt. John's wort uye tryptophan
Zviratidzo zvechirwere cheshuga zvakadai se insulin
Cherechedza kuti lorcaserin inokonzera kuora muviri kuwandisa varwere. Kana iwe une chirwere cheshuga rwechipiri II, uri mukutadza kwekutarisa shuga yakaderera ropa paunotora mapiritsi. Nokudaro, iwe unofanirwa kugara uchitarisa huwandu hwehuga hweropa uye urambe uchitaura nachiremba wako kana zvichida kudiwa kuchinja dhigiri.
Kurapa kwechirwere chepfungwa
Zvinodhaka zvekutarisira migraine misoro, kusanganisira zolmitriptan, sumatriptan, rizatriptan, frovatriptan, almotriptan, naratriptan, uye eletriptan (Relpax)
Codeine (inowanika mune rimwe chifuva nemishonga inorwadza)
Zvimwe kuyerwa-kurasikirwa kunowedzera
Rega muzvinamabhizi azive nezvemhando ipi zvayo yezvokudya, miriwo, kana kuyerwa-kurasikirwa kwezvinhu zvauri kutora.
Lorcaserin inoratidzika kuva muvengi mukuru wevana. Itafura ine tsvina haisi yako kana iwe uchitova nepamuviri kana kuti unoronga kubata chero nguva ipi zvayo. Ichi chemishonga chinogona kukuvadza mwana wako fetus unotungamirira ku fetal kusagadzikana. Kana waona kuti uri nepamuviri paunenge uchitora chirwere chacho, tumira chiremba wako pakarepo pane imwe zano.
Saka, nei Belviq chaiyo yakanyatsopesana pamusoro pekuita pamuviri? Nokuti kushaya kurasikirwa kunoparadza nguva apo wava nepamuviri. Uyezve, chidzidzo chakaitwa mumakonzo chikaratidza kuti vana vanopedzisira vaine uremu hwepanyama pasi muhupenyu hwavo hwose.
Izvo hazvibvumirwi zvakare kuyamwisa paine lorcaserin. Kunyange zvazvo pasina mitsara yakavimbika yekutsanangura kuti mishonga inogona kudarika sei mukaka wemvere uye kunokuvadza mwana, zviri nani kuva wakachengeteka kudarika urombo.
Mwoyo yepfungwa uye yeropa
Kana uine zvimwe zvinetso zvepfungwa uye utano hune chokuita neropa rega, iva nechokwadi chekuudza chiremba wako. Izvi zvinosanganisira;
Leukemia (inobata masero machena eropa)
Multiel myelomas (mumasero eplasma)
Sickle cell anemia (inobata maitiro emasero matsvuku eropa)
Penis deformities (Peyronie's disease, angulation, or cavernosal fibrosis)
Kudya uye kurovedza muviri
Deredzai makirori muzvokudya zvenyu uye itai kuedza kudzidzira nguva dzose. Nokuita kudaro, kunowedzera hutano hwako uye kunowedzera kukanganisa kwemafuta. Lorcaserin inoshanda zviri nani nemabasa epanyama.
Chengetedza shuga yako yeropa
Kana uine chirwere cheshuga chechipiri, uremu-kurasikirwa nemigumisiro ye lorcaserin kunogona kutungamirira kumazinga ehuga epasi. Nguva dzose igoverana neshumo yako nachiremba uyo achakumbira uye agadzirisa dhigirii.
Ramba uine chigaro chechiremba wako
Zvichida, chiremba achaongorora kufambira mberi kwako nemishonga, iyo inoteerera sei hurongwa hwako, uyewo anokupa mazano maererano.
Kuwedzera Tip-Offs When on Lorcaserin
Shingai yose lorcaserin tablet asi musatsvaga, kuparadzanisa, kana kupwanya
Usawedzera dhagi. Pamusoro peBelviq, tora rimwe bheti rimwe zuva rega rega asi Belviq XR, rimwe piritsi rinokwana kamwe pazuva.
Iva nechokwadi chekuzarurira kune mishonga yako yemishonga mishonga yose, zvinowedzera, kana michina yaunotora kare kana panguva iri paBelviq
Ramba kushandiswa kwe lorcaserin kana iwe usati wawana zvishoma kana 5% kushayiwa kwemazuva mushure mevhiki 12
Dzivisa kushandisa mishonga ine ngozi kana kutyaira, sezvo mishonga inogona kukanganisa maitiro ako, chiyeuchidzo, uye kukwanisa kuteerera. Ita chete kana iwe uchigutsikana kuti lorcaserin haibatsiri maitiro ako epfungwa
Usatora mishonga kana iwe uri nepamuviri
Kunzwisisa lorcaserin njodzi dzokutora, migumisiro yaro, zvinopisa upenyu, uye zvinobatsira. Kana zviratidzo zvikava zvakanyanya, tsvaka kurapa
Nedzimwe nzira, ita izvozvo kana uchiyamwisa
Ko shandisa lorcaserinin kusanganisa ne serotonergic zvinodhaka, dopamine vanopikisa, kana zvimwe zvekudya zvinowedzera se tryptophan. Kubatana pakati pezvinodhaka izvi zvinogona kukonzera serotonin syndrome kana zviratidzo zvakafanana neuroleptic malignant syndrome (NMS).
Kana uine zvimwe zvinetso zvepfungwa, taura nachiremba wako nezvezvakafanana asati atora kurerutsa kurapa lorcaserin
Iyi mishonga inokurudzirwa kuti igare yakazara nevarwere uye vanodarika vanhu vane BMI yevanenge 27kg / m2uye kuwirirana kunorema.
Usatora lorcaserin kana iwe uine mafuta asi uchiri muduku mudiki pasi pemakore 18
Usagovera iyi iyi piritsi nemumwe munhu
Clinical Cautions na Lorcaserin Contraindications
Tora lorcaserin pangozi yako pachako kana nekunyatsochenjerera kana uine zvinhu zvinotevera;
Kuora mwoyo kwakanyanya
Hypersensitivity kune lorcaserin zvinokonzera
Nhoroondo ye bradycardia (slow heart rate of <50BPM)
Nguva yekurega kutora lorcaserin;
Kana ukaita zviratidzo zvehutano hwemagetsi uye congestive mwoyo kusakundikana
Mukusangana kwakashata uye zviratidzo zvakakomba
Kana mishonga isingashandi zvachose, zvakadai kuti iwe haugoni kuona chero musiyano mushure memwedzi mina
Apo chiremba wako anokukurudzira kuti urege
Chirwere ichi chiri kukanganisa ropa rako rinosanganisira masero eropa, leukocytes, lymphocytes, uye neutrocytes
Kuramba kuchiuraya kuzvibata, pfungwa, kana zviito
Kana zvikaitika kudarika
Migumisiro Yakashata yeLorcaserin
Kungofanana nemishonga yakawanda, lorcaserin inogona kukonzera madhara. Zvisinei, zvimwe zvezviratidzo izvi zvinogona kunge zvenguva pfupi uye zvinopera kana muviri wako uchigadzirisa kumushonga. Kana zvikamu zvesimbi zvichingoenderera mberi, taura newadhirosi yako pakarepo.
Zvinowanzoitwa asi Zviduku Zvidiki
Kakawanda, kunorwadza, kana kuoma kuoma
Zviratidzo zvinoshanduka zvakadai se-blurriness
Dambudziko rehope dzakadai sezvipingamupinyi pakuwa kana kuramba uchivata
Kuneta kana kuneta
Muzviitiko zvisingaiti, migumisiro yemigumisiro inogona kuva yakaoma, saka, kushevedza kurapwa kwekukurumidzira. Zvinosanganisira;
Hluccinations (kuona kana kunzwa zvinhu zvisiripo)
Kamwe kamwe-kamwe mafungiro anochinja
Tsvina inokwidza, kuoma, kana kuti zvishoma
Amnesia (kukanganisa kwekanguva kwekuyeuka)
Kuzviuraya pfungwa nekuedza
Dzorera maoko, makumbo, tsoka, kana maoko
Kushaya mwoyo kwepfungwa (kukurumidza kana kunonoka)
Manzwiro ekuparadzanisa (kuva kunze kwemuviri wako)
Kuwedzerwa kwezvifuva kunyanya muvarume
Kusununguka kwemisi kubva muchifuva nekuda kwekukwirira kweprolactin
Priapism (nguva refu uye inorwadza erections inopedza maawa anopfuura matanhatu)
Kunyangwe takaedza kuvhara zviratidzo zvose zvinogona kuitika uye nemigumisiro ye lorcaserin piritsi, unogona kuwana chimwe chinhu chingave chisingave chiri pamusoro apa. Zvisinei, izvi zvinongoitika chete pane chiitiko chisingaoneki.
Mumamiriro ezvinhu akaoma, iva nechokwadi chekupa mhinduro pamigumisiro Dhiyabhorosi yepurogiramu yekubika iri mumutambo. Hotline yavo yakajeka ndeye 1-800-332-1088.
Chengetedza iyi mishonga mumudziyo wakasimbiswa zvakanyatsovharwa, zvichida mumudziyo inowanikwa. Ichengetedze kure nemhepo uye kupisa kwakanyanya. Kunyange zvazvo pasina chengetedzo yakachengetedza yekuchengetedza, chero chinhu chipi nechipi mumamiriro ezvinhu akafanana chinogamuchirwa. 25 ° C yakakwana asi huwandu hwe15 - 30 ° C huri hwakanaka.
Chengetedza uremu hunorasikirwa nemakemikari lorcaserin munzvimbo yakachengeteka kudzivirira kuwanikwa nevanhu vasingagamuchiri. Cherechedza kuti mishonga ibasa rinodzora uye rinogona kushungurudzwa. Kunze kwekuti, inogona kuva ine chepfu kuvana kana chero munhu upi zvake ari kutora pasina chiremba chiremba.
Kurasikirwa Zvakanaka kwaLorcaserin
Bvisa lorcaserin semarara yemishonga maererano nemitemo ye FDA, EPA, uye DEA. Usabvisa chimbudzi, uchitendera kuti chiyerere pamvura yakasviba, kana kuti kurega kudivi. Kuva yakasvibiswa mumvura, lorcaserin inogona kutungamirira mukusvibiswa.
Kune nzira dzakawanda dzekubvisa zvinodhaka. Kana ukangotora uye ukanyatsogadzira mushonga wemishonga, unogona kushandisa chirongwa chinotora mushonga, chinosanganisira kudzorera icho kumugadziri. Kana chirongwa ichi chisingawanikwi, tora rubatsiro kubva kune vane chiremera chemakambani ekutsvaga magetsi avo vangangopisa chigadzirwa kana kuviga mumugwagwa wakagamuchirwa.
Lorcaserin Ongororo Kubva Kudenga
Vamwe vanhu vave vari kuBelviq kwemwedzi mitanhatu chete asi vaigona kuona kuchinja kukuru. Semuenzaniso, mumwe mudziyo akanga atosiya 20lbs asati ashandisa mushonga wegore rose. Kakawanda, hafu yevanhu iyi yakarasikirwa kusvika pamakiromita 10 mukati memwedzi wokutanga.
Pasinei nokuva muponesi kune vakawanda, lorcaserin inoratidzika isingabatsiri kune vashomanana. Kunyange zvazvo zvingatora mwedzi wose kurasikirwa neA3lbs chete, vamwe vaisazonyora zvionekwe zvinokonzera lorcaserin. Pane zvakasiyana, boka iri rakanzwa kuti chido chavo chakawedzera zvinoshamisa.
Zvimwe zvikanganiso ndeye Bvisa!
90% yevaya vanongopedza mwedzi pavanenge vachitora lorcaserin vanhu vanonzwa vachityisa kubva pamigumisiro. Vazhinji vashandisi havazoregi kusuruvara, kupenga kunetseka, misoro, kushungurudzika, dutu, kusuruvara, uye kusagadzikana kwepfungwa.
Kunyange zvazvo vanhu vazhinji vachanzwa zviratidzo izvi, vashumiri vashomanana vave vakazvipira kuti migumisiro yechirwere yakagara kwenguva pfupi. Pakati pevadzidzi, zvinongowanikwa mukati memavhiki maviri ekutanga kutora lorcaserin. Zvinofadza, pamusoro pe2% yevatengi havana kusangana nemigumisiro ipi zvayo.
Kubva kuongororo ye lorcaserin, 88% yevashandi vakabvumirana kuti kuda kwavo kwakaderera zvikuru kubva pavakatanga kushandisa lorcaserin. Zvinobatsira kune avo vane zvishuvo zvakashata uye vanodya manzwiro. Kana kuenzanisa kunoitwa pakati pezvikamu zvaidya kare uye zvavari kudya iye zvino, mutsauko inenge hafu kana kuti zvishoma. Vanhu vashomanana vangatozvikumanikidza kuti vadye nokuti chido chokudya chinogona kupera kwemazuva.
Vanhu vashomanana avo vane chido chavo chisina kugadziriswa vakapupura kuti kumwe kurasikirwa kwekurema kwakanga kwavashandira. Kune vamwe, kusanganisira maitiro ekugadzirisa kwavo purogiramu yavo yakaita basa rakakura pakurasikirwa pasi pane kuvimba nezvishoma.
A 30-zuva rinotengeswa rinotora 330 bucks. Imwe inshuwarisi haina kuvhara mari yekutenga mishonga. Mumamiriro ezvinhu akadaro, imwe inogona kuvimba nemakoni ekugadzira uye makadhi ekutsvaga kana kutsva zvakadzika muhomwe dzavo. Kana uine ruzivo rwakakwana, iwe unogona kuripa zvishoma se $ 50.
Kana iwe ukaita zvishoma kudarika $ 15,000 pagore, iwe unofanirwa kunyevera muviri wako kuti usanyanya kuwandisa. Chiremba-kurasika kurasikirwa chirongwa inzira yakarurama yekudhonza account yako.
Lorcaserin inogona kuita kuti iwe uve chidhakwa pasina mavhiki maviri okuzvizivisa ku system yako. Vaya vanomira kutora mishonga vanogona kuve nemigumisiro.
Lorcaserin inhengo yemakemikari inoshandiswa kumakirini emakiriniki, kushandiswa kwehutano, uye kuwanikwa kwezvinopesana nekunyanyisa zvinodhaka. Lorcaserin hydrochloride inoumbwa apo lorcaserin inopindurwa ne hydrochloric acid.
Izvi zvinongowanikwa chete ku laboratories zvekutsvakurudza. Haisi yakachengeteka kumunhu kana kushandisa mhuka.
Lorcaserin inowanikwa pasi pemazita maviri emazita. Iwe unogona buy lorcaserin HCL seBelviq® kana Belviq XR® mahwendefa. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa muzvikamu zvose zviri lorcaserin hydrochloride.
Ichi chirasi yekurasikirwa kwehutori chigadziko che 10mg chinofanira kutorwa kaviri pazuva. Iyo yakakomba-shaka, biconvex, yebhuruu-mavara, uye firimu-yakavharwa ne'A 'kune rumwe rutivi uye' 10 'kune rumwe rutivi. Bhodhoro rimwe nerimwe rine mahwendefa e60.
shepi Round; biconvex
Imprinted code A; 10
Kuwanda kwehombodo 60 mahwendefa
Izvi zvinowanzogadziriswa kubvisa zvigadzirwa zvinokonzera kusagadzirisa kusagadzikana nemigumisiro, kunyanya panguva yekubatana kwezvinodhaka.
Iyi ipiritsi ye 20mg yakawedzerwa-yakabudiswa kamwe chete pazuva. Kusiyana neBelviq®, marimi aya anopa mahwendefa emuchena. Zvisinei, iyo inowedzera, biconvex, firimu-yakavezwa, uye yakanyorwa ne'A 'kune rumwe rutivi uye' 20 'kune rumwe rutivi. Bhodhoro reBelviq XR® rine mahwendefa e30.
Imprinted code A; 20
Kuwanda kwehombodo 30 mahwendefa
Ferric oxide tsvuku
FD & C Yesiyo #6
Lorcaserin HCL mari
Mutengo we lorcaserin hydrochloride (846589-98-8) inobva pane nzvimbo yako, chitoro chaunenge uchichitenga, uye uwandu huri mubvunzo. Semuenzaniso, milligram yemuchina wacho inokubhadhara zvakanyanya se $ 50. Zvisinei, kuenda kune zvakawanda zvinogona kuderedza mutengo kune 1g pamadhora kana chimwe chinhu chiduku.
Bhodhiq ibhodhoro rine 60 capsules (Belviq XR® ine mapiritsi e30) ichakugara iwe mwedzi uye inotengesa pakati pe $ 220 ne $ 330. Mutengo unobva pane piritsi ye lorcaserin iwe uchange uchitora sezvo Belviq XR® inotora madhora mashoma kudarika Belviq. Dzimwe makambani eshuwarisi anogona kuvhara chikamu chemhosva, nokudaro, achikusiyira neuwandu hwakaenzana hwokubhadhara. Kunze kwekuti, unogona kuwana mapikoni akasiyana uye makadhi ekutsvaga kubva kuBelviq, zvichiita kuti ubhadhe zvishoma.
Dambudziko rekutenga Belviq murairo we FDA unoda kuti uve nechirwere chechiremba. Zvisinei, kutengesa lorcaserin hakuna mvumo, kunze kwekuti iwe uri nyanzvi mumunda wekutsvakurudza.
Nzvimbo dzakawanda dzekutsvaga paIndaneti dzinoda iwe kuti unyorese kambani navo, tanga iwe pamba yako, uye ona mari. Iwe unogona kuwedzera huwandu kumotokari yako nekuisa mutemo. Izvo hazvina matanho anokosha ekutengesa kubva kune lorcaserin HCL yakachengeteka kune nzira dzose dzekutakura.
Ndiyo lorcaserin inodzorwa here?
Kunyange zvazvo isiri iyo inokurudzira, lorcaserin inogona kukonzera kuderedzwa kwezvinodhaka uye kushatiswa. Nokuda kwechikonzero ichi, Drug Enforcement Administration (DEA) yakarongedza iri pasi peMutemo weDzimwe Chetsika paHatendi IV.
Saka, vanogadzirisa sei miyero yako? Ndichatsanangura. Kunyanya kudarika kunogona kunge kwakangoerekana kwaitika asi zvinogona kunge zvakare kushandiswa kwechinangwa chokukurudzira mushandisi. Kuti uwane hutano, iwe unogona chete kugadzirisa zvinyorwa zvezviverengero zvishoma.
Mimwe yemigumisiro ye lorcaserin inosanganisa maitiro, kunzwa 'kukwirira', kudengenyeka, kana kufara. Muzviitiko zvishomanana, vamwe varwere vakasiya chirwere ichi vakaratidza zvimwe zviratidzo zvekudzoka. Zvose izvi zvinokwana uchapupu hwokuti mishonga inogona kukonzera kushungurudza kwepfungwa.
Unogona here kubuda uchibvisa lorcaserin?
Kubudirira kwe lorcaserin kunosungirirwawo nemabasa epanyama uye kuderedza-calori kudya. Nokuti chero bedzi iwe uchitora lorcaserin, kushanda nguva nenguva kunofanirwa kuva mararamiro ako. Chikamu cheavo vakashandisa icho chinotenda kuti maitiro anoita basa guru mukurema kwavo kurasikirwa rwendo pane kungoenderana chete nemishonga.
Ko lorcaserin ine njodzi pamuviri wako here?
Kunyange zvazvo mamwe emigumisiro yechirwere ishoma uye inowanzopera mushure mevhiki kana maviri, vamwe vangave vakaoma uye vagoisa upenyu pangozi. Kutsvakurudza kunoratidza kuti kupindira uku kwakaipa kune mikana yakaderera yekuitika. Saka, zvakaoma kuverenga nguva yavo.
Kuongorora kukuru kweUnited States hakuna kungosiya zvirevo pamusoro pengozi dzepfungwa dzakabatana ne lorcaserin asi zvakare yakauya nemitsva yakawanikwa. Heino mhedziso yezviitiko zvinokonzera lorcaserin;
Izvi zvinouya kana iwe ukatora Belviq pamwe nemishonga, iyo inowedzera kana inobatsira serotonin receptors. Iyi mishonga inosanganisira iyo inobata kuora mwoyo, zvinetso zvepfungwa, misoro yepamusoro, uye inotonhora.
Sirasi shoma yeropa inongowanikwa kune vanhu vanotambura nechirwere cheshuga chechipiri. Iwe unogona kuisa upenyu hwako pangozi kana ukakundikana kutarisa shuga uye uchinje mushonga wako wekushuga.
Valvular chirwere chemoyo
Lorcaserin mapiritsi angakonzera kukanganisa kwemwoyo yevhavha nekuda kwekushandiswa kwe5-HT2B receptors. Zvisinei, izvi zvinokonzerwa nehuwandu hwehutachiona nokuti mishonga ine hukama hwepamusoro hwe5-HT2C kupfuura dzimwe 5-HT receptors. Zvidzidzo zvinoratidza kuti chiyero chevaya vanotora lorcaserin neboka riri panzvimbobo hachati kuve nekusiyana kwakasiyana kana kuongororwa chirwere chemwoyo chegavvular.
Ichi chiitiko chinorwadza chinogona kugara kwemaawa anopfuura mana. Kana ikasarapwa, inogona kutungamira kwechigarire kumatehwe.
Ko ini ndicharasikirwa zvakadini ne lorcaserin?
Kana iwe uchisanganisira mabasa epanyama uye kudya kwakanaka kune mararamiro ako, iwe unogona kunge uchingorasikirwa nemapirundi akawanda. Nevhiki 12, iwe unofanirwa kunge wakarasikirwa ne5% yemuviri wako. Kana izvi zvisingaitiki, hapana tariro yeBelviq yekushandira iwe.
Kubva kuongororo ye lorcaserin tinogona kuenzanisa, vanhu vazhinji vakashuma kuti vakarasikirwa pakati pe10 - 15lbs nomwedzi wokutanga.
Wakamboedza Bheviviq kana chido chakafanana chinodzvinyirira uye chakashanda here?
90% yevashandi uchapupu hunoratidza kuti lorcaserin inoshanda. Kuvanhu vose, mishonga ingangodaro yakakonzera kusagadzirisa kana kusakwanisa. Mumamiriro ezvinhu akadaro, chiremba acharega kuyerwa kwako uye anopa imwe nzira yekurasikirwa nemishonga.
Kana imwe yezvokudya zvinokanganisa kusakwanisa kushanda iwe, kune zvimwe zvingasarudzwa izvo mhizimisi anogona kukurudzira. Sezvazvino, FDA yakagamuchira phentermine (Qsymia), orlistat, naltrexone (contrive), uye liraglutide.
Kurasikirwa kweutachiona zvinodhaka Lorcaserin ndeyevamwe vanorema uye vanopfuvura, kunyanya avo vanotambura ne-comorbidities. Mishonga ine mungozi yakawanda yehupenyu nemigumisiro yakaipa mumuviri asi kana uchitevera mazano echiremba, iwe uchava munharaunda yakachengeteka.
Lorcaserin inoda kuti iwe urambe uchiishandisa muupenyu hwako hwose kana maererano nemutemo. Kana iwe ukazvipa purogiramu mushure megore rekurasikirwa ne20lbs, gadzirira kugamuchira kukosha kwakadaro nemamwe mapaundi akawanda.
Kunyange zvazvo yakadhura zvakanyanya, iwe unongoda kushandisa mari yekuchengetedza, makoni, uye makadhi anowanikwa pasi paBelviq website. The lorcaserin mari inogonawo kuderedza kana inshuwarisi yako ine chikamu chemhosva. Zvinokurudzirwa kuongorora njodzi dzinobatanidzwa uye hutano hunobatsira usati watora $ 300 pamutambo wegore negore.